Uyifaka kanjani iVidiyo ku-Instagram ngamanyathelo ambalwa kakhulu? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Oktobha 28, 2020 0 IiCententarios 450
Yenza indalo yakho kunye neselfowuni okanye enye ikhamera, kwaye ufunde. Uyilayisha njani ividiyo kwi-Instagram ukuze wabelane nabahlobo bakho bonke. Ngesi sihlandlo, siza kukuxelela ngale post zonke iindlela zokulayisha ividiyo kule nethiwekhi.
Uyifaka kanjani ividiyo kwi-Instagram?
Inethiwekhi yokuncokola i-Instagram yenye yezona zicelo zisetyenziswa kunye nezikhutshelweyo kwihlabathi. Kule minyaka, kubalulekile. Ngenye yeendlela zentlalo, ezopolitiko, inkcubeko kunye nokusasazeka kweshishini, kwaye lo msebenzi ufumene amawaka ezigidi emivuzo kunye nabasebenzisi bemihla ngemihla.
Nokuba ziifoto, iividiyo okanye amabali, naphina emhlabeni, iapp yayiyiprojekthi encinci kubantu abancinci, ekugqibeleni iba yenye yezona zinto zibalulekileyo kwimidiya yoluntu. Uye wamkelwa kamva ngumphathi weendaba zosasazo uMark Zuckerberg, ongumnini wangoku we-Facebook kunye no-WhatsApp.
Ke masibone inkqubo yokuthumela iifoto, iividiyo kunye nokunye, kulula kakhulu. Kukho infinities yezixhobo ezinokusetyenziswa.
Ungazilayisha njani iividiyo kwi-Instagram ukusuka kwi-PC?
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufaka usetyenziso olukhutshelwe ngokucacileyo kwiVenkile yokuDlala okanye kwiVenkile yeVenkile, kuya kufuneka wenze iakhawunti entsha okanye ungene ngeakhawunti yakho ye-Facebook.
Kanye kwiakhawunti yakho, kwiwindow ephambili uza kubona ezantsi kwepaneli ii icon ezibonisa imisebenzi ethile.
Eyona ibalulekileyo yile iphakathi, kufuneka ucofe i "+" icon ukuze uqhubeke. Nje ukuba kwenziwe oku, singenisa ithebhu entsha eya kubonisa zonke iifoto kunye neevidiyo kwiPC yakho. Ukuba ividiyo ofuna ukuyilayisha yeyona yakutshanje, ungayifumana kwibhokisi yokuqala eboniswe efestileni; kodwa ukuba oku akunjalo, unokukhetha ukukhangela ngeefolda.
Kule nxalenye, ungabonisa ividiyo enye okanye nangaphezulu ukuze uzilayishe kwisithuba esinye kwaye ucofe emva kokukhetha i icon.
Emva koko, enye ipaneli iya kuvula ngevidiyo enye okanye nangaphezulu okanye imifanekiso oyilayishayo kunye neenketho ezahlukeneyo zokuhlela. Kweli candelo, ungongeza isihluzi osithandayo, okanye uhlengahlengise ubungakanani, umahluko, ukugcwala, ukuqaqamba, isithunzi, ukufiphala kunye nezinye izinto onokukhetha kuzo xa ugqibile uguqulelo, cofa kwindawo elandelayo.
Udinga nje ukongeza isihloko esichaza ividiyo esinceda ukuqonda ukuba ividiyo ibonisa ntoni, kunye nendawo enokushiyeka ingenanto ukuba ukhetha njalo.
Unokukhetha ukongeza ividiyo ngokwakho, unokufaka indawo, unokumakisha abanye abasebenzisi abavela kwividiyo nakwizicelo ezifuna ukuyaba njenge-Facebook, i-Twitter okanye iTumblr, ukuphucula ukusebenza kakuhle kwaye ulayishe ifayile enye eyahlukileyo. imithombo yeendaba zentlalo kwisithuba esinye. Xa yonke into ilungile, cofa kwindawo ethi ok, kwaye upapasho lwenziwe.
Ewe, kuba ufundile ukufaka kunye nokwabelana ngevidiyo kwesi sicelo njenge-Instagram, kubalulekile ukuba ufunde ukufaka iifoto kunye namabali, kwaye ngale ndlela ube nejelo lakho.
Iingcebiso zokulayisha ividiyo kwi-Instagram
Nangona kukho iindlela ezifanelekileyo kwinkqubo nganye, i-iOS (i-iPhone) inokuba yeyona ndlela ikhululekile kwezi zimbini, ikakhulu kuba isebenzisa usetyenziso lwangaphandle olunokuwenza phantse wonke umsebenzi wakho.
Ke masibone ngokulandelayo singayilayisha njani ividiyo kwi-Instagram ukusuka kwi-IOS okanye kwi-Android.
Ngenisa iividiyo kwi-IPhone
Ukungenisa iividiyo kule nethiwekhi yoluntu ekuthiwa yi-Instagram kukho usetyenziso olubizwa ngokuba yi-InstaChooser, ekuvumela ukuba wenze ukhetho lweevidiyo ezikhoyo kwikhamera yeRoll yeselfowuni yakho, kwaye uzilayishe kwi-Instagram. Kuyabonakala ukuba, yonke into ibonakala ilula kakhulu, kodwa ayisiyiyo, kuba kukho ubunzima, kwaye eso sisicelo esenziwayo kukwazisa iqhosha elisetyenziselwa ukungenisa nasiphi na isithombe okanye ividiyo oyigcinileyo kwi-IPhone yakho.
Inayo into enomdla kakhulu kwaye yiyo egunyazisa ukuba ungenise iividiyo ezininzi ngaxeshanye.
Ngayiphi na imeko, kuya kuba kuhle ukuqaphela ezinye iindlela ngaphambi kokwenza nayiphi na into enokuchaphazela esi senzo:
Ungaze usebenzise olu khetho ukufaka iifoto, kuba i-Instagram iyakuyeka ukusebenza.
Qiniseka ukuba ubude bevidiyo abudluli kwimizuzwana eli-15, kungenjalo i-Instagram app iya kuvalwa ngaphandle kwesaziso. Ukuba uthatha isigqibo sokungenisa iividiyo ezininzi ngaxeshanye, imeko enye iya kwenzeka kwaye ixesha elipheleleyo leevidiyo akufuneki lidlule kwimizuzwana eli-15.
Olunye ukhetho> ukungenisa iqhosha> vala i-Instagram> uyivule kwakhona, ukuba awulandeli la manyathelo, ayizukusebenza.
Ngenisa iividiyo kwi-Android
Iziphumo ziyafana, kodwa azichanekanga kangako, inkqubo yenziwa ngesandla phantsi kwenyathelo ngenyathelo Uyilayisha njani ividiyo kwi-Instagram.
Masibone; Xa sinevidiyo enobude nobunzima obufanelekileyo, sinokuyilayisha kwiprofayile yethu ye-Instagram. Kwaye senza njani? Ngendlela efanayo yokuba sifaka ifoto, cinezela nje uphawu, + khetha ividiyo esiyifunayo, ihleliwe kwaye i-voila, ayinzima kwaphela, nawuphi na umsebenzisi angayenza.
Okanye ungalayisha iividiyo kumabali. La mabali aya kuhlala ebonakala kubalandeli bakho iiyure ezingama-24 emva koko anyamalale. Oku kuyafana neskimu se-Snapchat, esitsala uninzi lulandelayo kwaye sisebenzisa izihluzi kunye neziphumo ezizodwa. Yabelana ngemifanekiso kunye neevidiyo ukuya kuthi ga kwimizuzwana eyi-15 ubude. Kulula kakhulu ukuzisebenzisa kwaye ziboniswa emazantsi kwicandelo lakho lembali.
Ungayilayisha njani iividiyo ezinde kwi-Instagram?
Emva koko, siza kukuxelela Indlela yokulayisha iividiyo ezinde kwi-instagram kwaye zimbini iindlela:
Isitshixo ngamabali e-Instagram, apho ungathumela khona iividiyo ezinemizuzwana eyi-15 ubuninzi, kodwa ezinye iinkqubo zinokukunceda ulayishe iividiyo ezinde kwaye uzisike kwiividiyo ezimfutshane zemizuzwana eyi-15, kwezi vidiyo umxholo obonisayo awuyi kulahleka. Ukongeza ekubeni nakho ukulungiselela iifomathi zemveliso ukulungiselela ukubekwa kwemifanekiso ebanzi.
Umsiki webali; Esi sicelo simahla kwi-Android kuphela, sikuvumela ukuba unciphise ividiyo nakweyiphi na ubude.
Splitter yamabali: Iziqwengana zokudlala ixesha elide kwiindawo ezithile zemizuzwana eyi-15, le nguqulo inesicelo esihlawulelweyo, ixabiso liyi-1 Euro, enezinto ezintle onokukhetha ukuzenza ukuba ulayishe iividiyo kwibali lakho, ngokunjalo, ukhetho oluya kukwazisa Uyilayisha njani ividiyo esuka kuYouTube ukuya kwi-Instagram.
Siyakumema ukuba ufake ikhonkco kwinqaku lethu Uwapapasha njani amabali akho kwi-Instagram nokunye okuninzi
1 Uyifaka kanjani ividiyo kwi-Instagram?
1.1 Ungazilayisha njani iividiyo kwi-Instagram ukusuka kwi-PC?
2 Iingcebiso zokulayisha ividiyo kwi-Instagram
2.1 Ngenisa iividiyo kwi-IPhone
2.2 Ngenisa iividiyo kwi-Android
3 Ungayilayisha njani iividiyo ezinde kwi-Instagram?